ဆေးရုံတှရေဲ့ အောကျစီဂငျြ ဘယျကရသလဲ - Thutazone
ဆေးရုံတှရေဲ့ အောကျစီဂငျြ ဘယျကရသလဲ
ရေးသားသူ – ဆရာ Phonemyint
ကတြျောတို့ မဆေ့ေးနဲ့ ICU Intensivist ဆရာဝနျမြား အတှကျ အဆနျးတကယျြမဟုတျပမေယျ့ အခွား အရပျဖကျပွညျသူမြား အတှကျ ဗဟုသုတ ဖွဈဖို့ ဆေးရုံတှအေတှကျ အောကျစီဂငျြ ထုတျပေးနိုငျတဲ့ နညျး မြား ကို တငျပွပေးအပျပါတယျ။
ကတြျောတို့ ဆေးဝနျထမျးမြား ပငျ ကိုယျ့ဆေးရုံ ရဲ့ အောကျစီဂငျြ ဘယျ က ရသလဲ။ မစပျစု တတျတာ လညျး အံ့ဩ မိပါတယျ။
ကိုးဗဈကာလ အောကျစီဂငျြ အမြားအပွားသုံးစှဲ နိုငျဖို့ ကုတငျ 50ဆေးရုံ‌လောကျ က အစ အောကျစီဂငျြ အလုံအလောကျ ရှိနဖေို့လိုပါတယျ၊အောကျစီဂငျြ ရငျးမွဈမရှိ ပါပဲ အခွားဘာရှိရှိ အလုပျမဖွဈပါ။
Oxygen is not the gas, but the essential Drug ပါ။ အောကျစီဂငျြ ဟာ မရှိမဖွဈ ဆေးဝါး ပါ။
ခှဲခနျး လူနာ ခနျး နဲ့ အပွငျ အဝေးမှာ သီးခွား အဆောကျအဦ နဲ့ ထားရပါမယျ။ Sizeကွီးအိုးမြား ကို အနညျးဆုံး တဖကျ 10လုံး လောကျ ဘယျ ညာ ဆကျသှယျ ထားတဲ့စနဈပါ။ ဘယျတနျးက အိုး တှကေုနျရငျ ညာတနျး ဖှငျ့ ဘယျတနျးက အိုးတှေ အသဈလဲ၊ ညာကုနျ ဘယျ ပွနျဖှငျ့ ညာအိုးတှေ လဲ။
ဒီနညျးက ရှေးဟောငျး နညျး မီးမလိုပါဘူး။ စောငျ့ကွညျ့ဖို့ လူ ၊ သယျယူစရာ ကား ၊ Oxygen Regulator အိုး ကွီးတှေ ရငျးနှီးရပါမယျ၊ အိုး လေး တှေ ဖွညျ့ ဖို့ ပိုကျခေါငျး ဆောငျထားရငျ ခရီးတို လူနာအသယျအပို့ ဝနျဆောငျမှုပေးနိုငျပါမယျ။ (ဒါပမေယျ့ သိသလောကျ ဆေးရုံ အလတျ မြားဟာ အိုးကွီး ၂ လုံး ၃ လုံး နဲ့သာ စခနျးသှားနကွေပါတယျ။)
လထေဲ က Nitrogen + Oxygenရောနတေဲ့ ရိုးရိုးလကေို လစေုပျစကျနဲ့ စုပျသှငျးပွီး Nitrogen ဖယျ စဈနိုငျတဲ့ Zeolites Chamber တှထေဲဖွတျ ပွီး Oxygen ခညျြးသကျသကျ ကို လအေိုး ထဲ မောငျးထညျ့၊ ထိုမှ တဆငျ့ Oxygen Cylindersထဲ ထညျ့ခငျြထညျ့ စု၊ သို့မဟုတျ ဆေးရုံ ပိုကျလိုငျးစနဈထဲ ထညျ့တဲ့စကျနဲ့ ပိုကျလိုငျးစနဈပါ။
ထိုစကျ ကတော့ ကုမ်မဏီ အလိုကျဈေး နဲ့ ဝနျဆောငျမှုစရိတျ အမွဲ ရှိနပေါမယျ။ လြှပျစဈမီး မပွတျလိုပါတယျ။ မီးစကျအကွီး ထိုငျထားကွရပါမယျ။ အိုးကွီးတှထေဲလညျး စု ထား ဖို့ လိုသလို Cylinder Manifold System နဲ့ ခြိတျဆကျ ထားလေ့ ရှိပါတယျ။ အတနျကွီးတဲ့ ကုတငျ 100ဆေးရုံတိုငျးမှာ အနညျးဆုံး ၂ လုံး (တလုံးပကျြ တလုံးမောငျး၊ ပကျြတဲ့အလုံးပွငျ ၊) ရှိထားသငျ့တာ တော့ ကွာပါပွီ၊
ဒါကတော့ ကုတငျ ၂၀၀ /၃၀၀/၅၀၀ လောကျက အစ အဆငျ့မွငျ့ ဆေးရုံတိုငျးမှာ မရှိမဖွဈလို ပါတယျ။ (ကံ ဆိုးစှာ အကွောငျးအမြိုးမြိုးကွောငျ့ နှောငျ့နှေးခဲ့ရတဲ့ စနဈပါ) Boiling point -118°C ရှိသော Oxygenကို အရညျဖြျောပွီး – 180°C လောကျအေးတဲ့ ဧရာမ ဓါတျဗူးကွီးထဲ လှောငျသိမျးတဲ့စနဈပါ။ အိုး အပွငျ ပိုကျတှေ အရညျကို သဘာ အပူ ခြိနျလေးနဲ့ အလိုအလြောကျအငှပြေံ့စသေော၊ Evaporator ပွားတှနေဲ့ ခြိတျဆကျသှယျတနျးပွီး ဖိအားမြားမြား နဲ့ ဆေးရုံ ခှဲခနျး လူနာဆောငျတှဆေီ ပို့တဲ့ စနဈပါ၊
စတငျ တညျဆောကျစဉျ အရငျးမြားပမေယျ့ နောကျပိုငျး Oxygen အရညျလာဖွညျ့ပေးရုံ သာမို့ ရရှေညျကုနျကစြရိတျ တှကျခကြေိုကျပါတယျ။ အရငျက Liquid Oxygen plant စကျရုံ ပွညျတှငျးမှာ မရှိပမေယျ့ အခု သီလဝါ မှာ ရှိနပေါပွီ။ ဝယျအားရှိရငျ နောကျထပျ စကျရုဇံတှေ လာရငျးကွမှာပါပဲ။ တောငျ့တငျးခိုငျမာတဲ့ Oxygen source ပါ။
၄. အမြားအားဖွငျ့ ပုံမှနျ ဆေးရုံ ကွီးတှမှော အထကျက ဖျောပွပါ စနဈ ၃ မြိုးလုံး သုံးရပါတယျ။ မီးဘေး အကာအရံ အစောငျ့အရှောကျ ကလညျး အရေးကွီးပါတယျ။ သို့မှသာ တောငျ့တငျးသော နောကျကြောလုံသော စနဈကောငျး ရမှာဖွဈပါတယျ။ ကတြျောတို့မှာ ဘယျလောကျကောငျးပွီး ဈေးကွီးတဲ့ Ventilator တှေ ရှိရှိ Oxygenနဲ့ Compressed Medical Air မရှိရငျ လြှပျစဈမီး မမှနျ လြှငျ ဘာမှ လုပျမရ ကယျမရပါဘူး။
(အရငျ အမှောငျခတျေ ကာလ က လုံးဝနီးပါး ဥပက်ေခာ ပွုထား ခဲ့ လို့ ဆေးရုံတှရေဲ့ရေ လေ မီး မရှိမဖွဈ စနဈတှေ ဟာ လုံလောကျမှု မရှိပါပဲ ခှဲခနျးမြား လူနာကွပျမတျခနျးမြားကို ဆိုငျရာ ဆရာဝနျမြား မှ တတျနိုငျသမြှ ပညာအား လုပျအား အလှုခံရတဲ့ အားလေး နဲ့ လကျပူတိုကျ လုပျပေးခဲ့ကွတာပါ။)
ဒါကွောငျ့ ကိုဗဈက ပေးတဲ့ သငျခနျးစာကို အရှုံး မှ အမွတျထုတျပွီး ဆေးရုံမြားကို ကံရာဇာကွီး ဘုရားတညျသလို တကယျ့ အုတျမွဈ ကောငျးမြား တညျဆောကျနိုငျပါစေ ဖွဈအောငျ လုပျဖို့ ပျေါလစီအား ငှေ အား ဝါယမအားစိုကျကွပါစေ ဆုတောငျးပါတယျ။(ကတြျောတို့ ဘေးက Bangladesh မှာတောငျ နယျဆေးရုံ ငယျ တှမှော Liquid Oxygen VIE တှရှေိပါတယျ။ ကတြျောတို့ ဘယျလောကျကနျြခဲ့သလဲ စဉျးစားဖို့ပါ)
နောကျတခု က တခုပကျြရငျ တခုရံ ဖို့ စီမံခွငျး ပါ (ဒီ ကိစ်စ မှာ ကတြျောတို့ လူမြိုးဟာ ဗိုလျခြုပျအောငျဆနျး စကား ငှားရ ရငျ အတျော ဖငျြးကွပါတယျ)။ ဩစီ လို နိုငျငံမြိုး မှာ တော့ ဆေးရုံတှေ ဘယျသောအခါမှ မီးမပကျြတာတောငျ မီးစကျကွီး ၃ လုံးထိုငျထားပါတယျ။ဒီဇယျ ၆ လ စာ အရနျ လှောငျပါတယျ၊ အဲ့ဒါတှကေုနျရငျ Royal Navy က စကျရော ဆီရော ထောကျပံ့ရမယျ လို့ မူ ရှိပါတယျ၊ တနှဈ တခါ နှဈခါ အလကားနေ ဇာတျတိုကျပါတယျ။
ဗမာပွညျ ခဏခဏ လာလညျတဲ့ ဩစီ ဆေးရုံကွီး တခုက Chief Engineer က “မငျးတို့ ပွညျကို ငါ လာလညျ ဖူးတာ ၁၉၉၄ ကတညျးက အခေါကျမနညျး တော့ဘူး၊ အခွား အရာတှေ ပွောငျးလဲ လာပမေယျ့ မငျးတို့ ဆေးရုံ‌ က Cylinder အဟောငျးတှေ ဟာ ရနျကုနျဘူတာကွီးက ရထားတှလေိုပဲ ဘာမှ မပွောငျးလဲနိုငျသေးတာ တကယျအံ့ဩတယျ ကှာ” လို့ ပွောဖူးပါတယျ။ တောငျ့တငျးခိုငျမာသော မီး ရေ လေ Infrastructure မြားကို အခိုငျအမာ တညျဆောကျသငျ့တာ အလှနျ ကွာခဲ့ပွီ ဖွဈကွောငျး နှိုးဆျောအပျပါတယျ ခငျဗြား။
(ပွညျသူမြား ကလညျး ကိုယျ့ ပွညျ ကိုယျ့ အရပျ က ဆေးရုံမြား အတှကျ ငှအေား တတျသလောကျ ထောကျကူကွပါ။)
ဆေးရုံတွေရဲ့ အောက်စီဂျင် ဘယ်ကရသလဲ
ရေးသားသူ – ဆရာ Phonemyint
ကျတော်တို့ မေ့ဆေးနဲ့ ICU Intensivist ဆရာဝန်များ အတွက် အဆန်းတကျယ်မဟုတ်ပေမယ့် အခြား အရပ်ဖက်ပြည်သူများ အတွက် ဗဟုသုတ ဖြစ်ဖို့ ဆေးရုံတွေအတွက် အောက်စီဂျင် ထုတ်ပေးနိုင်တဲ့ နည်း များ ကို တင်ပြပေးအပ်ပါတယ်။
ကျတော်တို့ ဆေးဝန်ထမ်းများ ပင် ကိုယ့်ဆေးရုံ ရဲ့ အောက်စီဂျင် ဘယ် က ရသလဲ။ မစပ်စု တတ်တာ လည်း အံ့ဩ မိပါတယ်။
ကိုးဗစ်ကာလ အောက်စီဂျင် အများအပြားသုံးစွဲ နိုင်ဖို့ ကုတင် 50ဆေးရုံ‌လောက် က အစ အောက်စီဂျင် အလုံအလောက် ရှိနေဖို့လိုပါတယ်၊အောက်စီဂျင် ရင်းမြစ်မရှိ ပါပဲ အခြားဘာရှိရှိ အလုပ်မဖြစ်ပါ။
Oxygen is not the gas, but the essential Drug ပါ။ အောက်စီဂျင် ဟာ မရှိမဖြစ် ဆေးဝါး ပါ။
ခွဲခန်း လူနာ ခန်း နဲ့ အပြင် အဝေးမှာ သီးခြား အဆောက်အဦ နဲ့ ထားရပါမယ်။ Sizeကြီးအိုးများ ကို အနည်းဆုံး တဖက် 10လုံး လောက် ဘယ် ညာ ဆက်သွယ် ထားတဲ့စနစ်ပါ။ ဘယ်တန်းက အိုး တွေကုန်ရင် ညာတန်း ဖွင့် ဘယ်တန်းက အိုးတွေ အသစ်လဲ၊ ညာကုန် ဘယ် ပြန်ဖွင့် ညာအိုးတွေ လဲ။
ဒီနည်းက ရှေးဟောင်း နည်း မီးမလိုပါဘူး။ စောင့်ကြည့်ဖို့ လူ ၊ သယ်ယူစရာ ကား ၊ Oxygen Regulator အိုး ကြီးတွေ ရင်းနှီးရပါမယ်၊ အိုး လေး တွေ ဖြည့် ဖို့ ပိုက်ခေါင်း ဆောင်ထားရင် ခရီးတို လူနာအသယ်အပို့ ဝန်ဆောင်မှုပေးနိုင်ပါမယ်။ (ဒါပေမယ့် သိသလောက် ဆေးရုံ အလတ် များဟာ အိုးကြီး ၂ လုံး ၃ လုံး နဲ့သာ စခန်းသွားနေကြပါတယ်။)
လေထဲ က Nitrogen + Oxygenရောနေတဲ့ ရိုးရိုးလေကို လေစုပ်စက်နဲ့ စုပ်သွင်းပြီး Nitrogen ဖယ် စစ်နိုင်တဲ့ Zeolites Chamber တွေထဲဖြတ် ပြီး Oxygen ချည်းသက်သက် ကို လေအိုး ထဲ မောင်းထည့်၊ ထိုမှ တဆင့် Oxygen Cylindersထဲ ထည့်ချင်ထည့် စု၊ သို့မဟုတ် ဆေးရုံ ပိုက်လိုင်းစနစ်ထဲ ထည့်တဲ့စက်နဲ့ ပိုက်လိုင်းစနစ်ပါ။
ထိုစက် ကတော့ ကုမ္မဏီ အလိုက်ဈေး နဲ့ ဝန်ဆောင်မှုစရိတ် အမြဲ ရှိနေပါမယ်။ လျှပ်စစ်မီး မပြတ်လိုပါတယ်။ မီးစက်အကြီး ထိုင်ထားကြရပါမယ်။ အိုးကြီးတွေထဲလည်း စု ထား ဖို့ လိုသလို Cylinder Manifold System နဲ့ ချိတ်ဆက် ထားလေ့ ရှိပါတယ်။ အတန်ကြီးတဲ့ ကုတင် 100ဆေးရုံတိုင်းမှာ အနည်းဆုံး ၂ လုံး (တလုံးပျက် တလုံးမောင်း၊ ပျက်တဲ့အလုံးပြင် ၊) ရှိထားသင့်တာ တော့ ကြာပါပြီ၊
ဒါကတော့ ကုတင် ၂၀၀ /၃၀၀/၅၀၀ လောက်က အစ အဆင့်မြင့် ဆေးရုံတိုင်းမှာ မရှိမဖြစ်လို ပါတယ်။ (ကံ ဆိုးစွာ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် နှောင့်နှေးခဲ့ရတဲ့ စနစ်ပါ) Boiling point -118°C ရှိသော Oxygenကို အရည်ဖျော်ပြီး – 180°C လောက်အေးတဲ့ ဧရာမ ဓါတ်ဗူးကြီးထဲ လှောင်သိမ်းတဲ့စနစ်ပါ။ အိုး အပြင် ပိုက်တွေ အရည်ကို သဘာ အပူ ချိန်လေးနဲ့ အလိုအလျောက်အငွေ့ပျံစေသော၊ Evaporator ပြားတွေနဲ့ ချိတ်ဆက်သွယ်တန်းပြီး ဖိအားများများ နဲ့ ဆေးရုံ ခွဲခန်း လူနာဆောင်တွေဆီ ပို့တဲ့ စနစ်ပါ၊
စတင် တည်ဆောက်စဉ် အရင်းများပေမယ့် နောက်ပိုင်း Oxygen အရည်လာဖြည့်ပေးရုံ သာမို့ ရေရှည်ကုန်ကျစရိတ် တွက်ချေကိုက်ပါတယ်။ အရင်က Liquid Oxygen plant စက်ရုံ ပြည်တွင်းမှာ မရှိပေမယ့် အခု သီလဝါ မှာ ရှိနေပါပြီ။ ဝယ်အားရှိရင် နောက်ထပ် စက်ရုဇံတွေ လာရင်းကြမှာပါပဲ။ တောင့်တင်းခိုင်မာတဲ့ Oxygen source ပါ။
၄. အများအားဖြင့် ပုံမှန် ဆေးရုံ ကြီးတွေမှာ အထက်က ဖော်ပြပါ စနစ် ၃ မျိုးလုံး သုံးရပါတယ်။ မီးဘေး အကာအရံ အစောင့်အရှောက် ကလည်း အရေးကြီးပါတယ်။ သို့မှသာ တောင့်တင်းသော နောက်ကျောလုံသော စနစ်ကောင်း ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ကျတော်တို့မှာ ဘယ်လောက်ကောင်းပြီး ဈေးကြီးတဲ့ Ventilator တွေ ရှိရှိ Oxygenနဲ့ Compressed Medical Air မရှိရင် လျှပ်စစ်မီး မမှန် လျှင် ဘာမှ လုပ်မရ ကယ်မရပါဘူး။
(အရင် အမှောင်ခေတ် ကာလ က လုံးဝနီးပါး ဥပေက္ခာ ပြုထား ခဲ့ လို့ ဆေးရုံတွေရဲ့ရေ လေ မီး မရှိမဖြစ် စနစ်တွေ ဟာ လုံလောက်မှု မရှိပါပဲ ခွဲခန်းများ လူနာကြပ်မတ်ခန်းများကို ဆိုင်ရာ ဆရာဝန်များ မှ တတ်နိုင်သမျှ ပညာအား လုပ်အား အလှုခံရတဲ့ အားလေး နဲ့ လက်ပူတိုက် လုပ်ပေးခဲ့ကြတာပါ။)
ဒါကြောင့် ကိုဗစ်က ပေးတဲ့ သင်ခန်းစာကို အရှုံး မှ အမြတ်ထုတ်ပြီး ဆေးရုံများကို ကံရာဇာကြီး ဘုရားတည်သလို တကယ့် အုတ်မြစ် ကောင်းများ တည်ဆောက်နိုင်ပါစေ ဖြစ်အောင် လုပ်ဖို့ ပေါ်လစီအား ငွေ အား ဝါယမအားစိုက်ကြပါစေ ဆုတောင်းပါတယ်။(ကျတော်တို့ ဘေးက Bangladesh မှာတောင် နယ်ဆေးရုံ ငယ် တွေမှာ Liquid Oxygen VIE တွေရှိပါတယ်။ ကျတော်တို့ ဘယ်လောက်ကျန်ခဲ့သလဲ စဉ်းစားဖို့ပါ)
နောက်တခု က တခုပျက်ရင် တခုရံ ဖို့ စီမံခြင်း ပါ (ဒီ ကိစ္စ မှာ ကျတော်တို့ လူမျိုးဟာ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း စကား ငှားရ ရင် အတော် ဖျင်းကြပါတယ်)။ ဩစီ လို နိုင်ငံမျိုး မှာ တော့ ဆေးရုံတွေ ဘယ်သောအခါမှ မီးမပျက်တာတောင် မီးစက်ကြီး ၃ လုံးထိုင်ထားပါတယ်။ဒီဇယ် ၆ လ စာ အရန် လှောင်ပါတယ်၊ အဲ့ဒါတွေကုန်ရင် Royal Navy က စက်ရော ဆီရော ထောက်ပံ့ရမယ် လို့ မူ ရှိပါတယ်၊ တနှစ် တခါ နှစ်ခါ အလကားနေ ဇာတ်တိုက်ပါတယ်။
ဗမာပြည် ခဏခဏ လာလည်တဲ့ ဩစီ ဆေးရုံကြီး တခုက Chief Engineer က “မင်းတို့ ပြည်ကို ငါ လာလည် ဖူးတာ ၁၉၉၄ ကတည်းက အခေါက်မနည်း တော့ဘူး၊ အခြား အရာတွေ ပြောင်းလဲ လာပေမယ့် မင်းတို့ ဆေးရုံ‌ က Cylinder အဟောင်းတွေ ဟာ ရန်ကုန်ဘူတာကြီးက ရထားတွေလိုပဲ ဘာမှ မပြောင်းလဲနိုင်သေးတာ တကယ်အံ့ဩတယ် ကွာ” လို့ ပြောဖူးပါတယ်။ တောင့်တင်းခိုင်မာသော မီး ရေ လေ Infrastructure များကို အခိုင်အမာ တည်ဆောက်သင့်တာ အလွန် ကြာခဲ့ပြီ ဖြစ်ကြောင်း နှိုးဆော်အပ်ပါတယ် ခင်ဗျား။
(ပြည်သူများ ကလည်း ကိုယ့် ပြည် ကိုယ့် အရပ် က ဆေးရုံများ အတွက် ငွေအား တတ်သလောက် ထောက်ကူကြပါ။)